असार १३, काठमाडौं । आगामी साताबाट राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादनको परीक्षण सुरु गर्ने तयारी थालिएको छ । ४८ घण्टाको सुरुङ परीक्षण शनिबार मध्यरातिमा सकिएको छ । माथिल्लो तामाकोसीको बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान गर्नका लागि आइतबारबाट तार तान्ने काम सु...
रामेछाप नगरपालिकाले कृषि पर्यटन सडक र खानेपानीलाई विशेष प्राथमिकता दिने
असार ११, रामेछाप । रामेछाप नगरपालिकाले नगरको प्रथम नगर सभाले लिएको लक्ष्य कृषि पर्यटन सडक खानेपानी हाम्रो पुर्वाधार रामेछाप नगर विकाशको दिगो आधार भन्ने मुल नारालाई प्राथमिकता दिँदै नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९को लागी ६३ करोड़ १९ लाख ४४ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ ५२ पैशाको वजेट सार्वजनिक गरेको छ...
३ दिनको मौसम, कहाँ-कहाँ धेरै पानी पर्दैछ ?
असार ११, काठमाडौं । नेपालका बिभिन्न भागमा आगामी ३ दिन हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । शुक्रबार विहान ३ दिनको मौसम प्रक्षेपणसम्बन्धी बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी महाशाखाले गराएको छ । बुलेटिन अनुसार आज देशभर सामान्यदेखि पूणर् बदली रहनेछ ।&nb...
२० पदाधिकारी संवैधानिक निकायमा नियुक्त
असार १०, काठमाडौं । लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी छन् । वैशाख अन्तिम साता संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका २० पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्त गरिएको हो । संवैधानिक परि...
मौलापुरको नगरसभामा झडप
असार १०, रौतहट । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको नगरसभामा झडप भएको छ । नगरसभालाई बिथोल्न बिहिबार विपक्षी समूहले ढुंगामुढा गर्न थालेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दुई दर्जन सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ । दुई प्रहरीसहित चार जना झडपका क्रममा घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । ...
२०२१ भित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइन्छः प्रधानमन्त्री ओली
असार १०, काठमाडौं । सन् २०२१ भित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले नेपाल बाल संगठनको केन्द्रीय सभाको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै खोपको अभाव क्रमशः सुल्झँदै गएको समेत बताए । यस अगाडि प्रधानमन्त्रीले आफूले घोषणा गरेको मंसिरको निर्वाच...
जातीय विभेदका कारण कोठा नदिएको अभियोगमा पक्राउ परेकी घरबेटी थुनामुक्त
असार ९ , काठमाडौं । जातीय विभेदका कारणले कोठा नदिएको अभियोगमा पक्राउ परेकी घरबेटी सरस्वती प्रधान थुनामुक्त भएकी छन् । प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारले तीन दिनअघि पक्राउ गरेको प्रधानलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले जेलबाट छाड्न आदेश दिएको हो । पीडित रुपा सुनारको जाहेरीका आधारमा उनलाई छुवाछुत सम्बन्ध...
भारतमा संक्रमितको संख्या तीन करोड नाघ्यो
असार ९, काठमाडौं । भारतमा कोभिड-१९ बाट संक्रमित हुनेको संख्या तीन करोड नाघेको छ । अहिलेसम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या ३ करोड २८ हजार ७०९ पुगेको भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले बताएको छ । भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र कोरोनाका ५० हजारभन्दा धेरै नयाँ संक्रमित फेला प...
अब सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री नगर्ने
असार ९, काठमाडौं । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले खाद्यान्नमा उपभोक्ताहरुलाई दिंदै आएको छुट अब नदिने निणर्य गरेको छ । जेठ २० गतेदेखि उपभोक्ताहरुले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको बिक्री केन्द्रहरुबाट चामल, नुन, त...
तत्काल ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज खोप दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
असार ८, काठमाडौं । कोभिशिल्डको पहिलो डोज खोप लगाएका ६५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई यथाशीघ्र दोस्रो डोज खोप दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गत फागुनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले कोभिशिल्डको पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज खोप दिन ढिला भइरहेको भन्...
कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई खोपको अभाव
असार ८, काठमाडौं । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप विश्वका गरीब मुलुकमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई खोपको अभाव भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले बताएको छ । अहिलेसम्म कोभ्याक्स कार्यक्रममार्फत १३१ मुलुकमा ९ करोड डोज खोप वितरण गरिएको डब्ल्यूएचओका वरिष्ठ सल...
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै केही स्थानमा ट्राफिक जाम
असार ८, काठमाडौं । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै आजबाट निजी सवारी साधन जोर बिजोरका आधारमा सञ्चालनमा आएका छन् । ट्याक्सीलाई पनि जोरबिजारमा सञ्चालन गर्न दिइएको छ । जोर गते जोर नम्बर र बिजोर गते विजोर नम्बर (नम्बर प्लेटको अन्तिम अक्षर)का सवारी चल्नेछन् । तर सार्वजनिक सवारी साधन भने अझै सञ्चालमा आएक...
असार ८, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चले छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दुई पटकसम्म गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन रद्द हुने छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खति...
असार ७, काठमाडौं । राइड सेयरिङ सेवाहरु दिने नेपाली कम्पनी टुटल र पठाओ लगायतका कम्पनीले सोमबार रातीबाट नियमित सेवा दिने तयारी थालेका छन् । निजी सवारीलाई जोर-बिजोर प्रणाली लगाएर उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो गरेसँगै राइडिङ सेयर गर्ने एपहरु सेवमा फर्किन लागेका हुन् । उनीहरुले पनि जोर-बिजरो प्रण...
लाफा रुङ फाउण्डेशनले सिन्धुपाल्चोकका बाढीपीडितलाई गर्यो राहत वितरण
असार ६, सिन्धुपाल्चोक । लाफा रुङ फाउण्डेशनले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं. ६, चनौटेका ३५ घरधुरी बाढीपीडितलाई शनिबार राहत वितरण गरेको छ । लाफा ग्रुप लिमिटेडका सञ्चालक रक्षाबहादुर रैकामगर, स्थानीय समाजसेवी अर्जुनकुमार भण्डारी, राजु थापामगर र नेपाल मगर संघ, हेलम्बु गाउँ समितिका अध...
सर्वोच्चले सुदूरपश्चिम सरकारलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार
असार ७, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्को वैधानिकतामा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासले प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीका...
असार ६, रामेछाप । अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी सदस्य रामेछापका युवा नेता नेत्रबहादुर बुढाथोकीले मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेश बस्नेतलाई नौं बुँदे खुल्ला पत्र लेखेका छन् । मन्थली नगरपालिकाले निति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहँदा निति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने बिषयमा सुझाव सहिद खुल्ल...
असार ६, काठमाडौं । उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप गर्दा निजी सवारी साधनलाई सञ्चालन गर्न दिने प्रशासनले तयारी गरेको छ । साँझ ५ बजे सिडिओको बैठक बस्दैछ । तर जोर-विजोर प्रणालीमा चल्न दिने वा अरु नियम लगाउने भन्ने निणर्य भने भएको छैन । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका संकट व्यवस्थापन समिति (डीसीसी...
बाँकेमा सङ्क्रमणको अवस्था सामान्य, अस्पतालमा ८० प्रतिशत शय्या खाली
असार ६, बाँके । बाँकेमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) सङ्क्रमणको अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ । कोरोनाको उपचार हुँदै आएका बाँकेका अस्पतालमा हाल उपचाररत ७४ मध्ये बाँके जिल्लाका १३ जनामात्रै रहेको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका स्रोत व्यक्ति तेज वलीले बताए । बाँकेका कोभिड अस्पतालका...